Yabelana ngolwazi lwakho lweLinux | Kusuka kuLinux
Yabelana ngolwazi lwakho lweLinux
Ukubhala ibhulogi, ukunigcina nonke nivuselelwa, nsuku zonke, ngaphandle kokushaja isenti, kuwumsebenzi onzima kakhulu. Kubandakanya ukubhala ngeMigqibelo nangeSonto ngisho nasegumbini lokugezela, ngisho nakumaholide ami eholidini noma lapho ngiya phesheya ngiyosebenza. Yebo, isenzo esibonwa kancane sokuzinikela, njengomsebenzi omuhle walabo abadidiyeli bohlelo abacishe bangaziwa abathuthukisa isoftware yamahhala. Lokhu, ngaphezu kwalokho, kuhlelwe esimeni lapho abasebenzisi / abafundi beya ngokufuna ngenkani, futhi kunesizathu esizwakalayo.
Lesi sethulo asifuni ukuhawukela noma ukushiya imishwana yokubonga, kepha kunalokho khuthaza labo abangakenzi umnikelo emphakathini ukuthi benze lokho. Lokhu kusho ukushiya leso simo sengqondo sokuhlala nje kwesinye isikhathi esinethezeka kithina.
Namuhla ngine-epiphany, uhlobo lwesambulo: into ebaluleke kakhulu umphakathi. Kuyisici esondla isoftware yamahhala. Eqinisweni, lokhu kusho ukuvula isoftware emphakathini futhi nguyena onika impilo. Sibona kulawo maphrojekthi ukuthi, njengoba engenawo umphakathi obalulekile, angena ekukhohlakalweni.
Manje uwakha kanjani umphakathi? Impendulo isembuzweni. Ukwakha kusho isenzo. Kodwa isenzo sikabani? Kwabambalwa? Kuzo zonke? Kulapho umehluko phakathi kwezinhlobo ezahlukene zomphakathi.
Ngokusobala, emkhakheni wesoftware yamahhala uma sikhuluma ngomphakathi sibhekisa ekubambeni iqhaza okubalulekile kweningi lamalungu alo. Yilolo hlobo lomphakathi engingathanda ukuba yingxenye yalo futhi ngikholelwa ukuthi, ngesizathu esizwakalayo, singaphikisana nokuthi luhlobo lomphakathi ngokuhambisana nefilosofi engemuva kwesoftware yamahhala.
Umuntu angabamba iqhaza ngezindlela eziningi nasezindaweni eziningi, impela iningi lenu selivele liyakwenza. Ukwenza umnikelo wekhodi lapha, ukuhumusha lapho, njll.
Isiphakamiso sami ukuvula iminyango yale bhulogi, okuthi ngemuva komzamo omkhulu isibe yifayela le- inkomba ngaphakathi kwe umphakathi wesoftware wamahhala. Ngifuna wazi ukuthi lapha unesiteshi okufanele usishicilele ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga noma yimuphi umnikelo ofuna ukuwenza. Akudingeki ukuthi babe ngama-blogger noma ochwepheshe beLinux, banokuthile nje okuhle ukukuhlanganyela futhi bakubhale phansi.
Umqondo wokwenza ifayela le- ukuncintisana masonto onke. Ukuphela kokufanele ukwenze ukusithumela i-a imeyili nalokho umfundisi omncane, ukuthi ithiphu, njll. (ku ifomethi yombhalo ocacile) abacabanga ukuthi kufanelekile share. Siyakunakekela ukufometha, ukukushicilela nokunikeza ukuvuma nokuvuma icala, kunjalo.
Ngabe uzimisele ukwenza okuncane kwakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Yabelana ngolwazi lwakho lweLinux
UJose Antonio Costa de Moya kusho
Kubonakala kimi kuyisinyathelo esihle sokujoyina. Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ungayi-oda bese wenza i-wiki.
Phendula uJosé Antonio Costa de Moya
okuhle 😀 ukuqhubeka nokukhula, le bhulogi iyisethenjwa esihle kimi njengomsebenzisi we-linux, angizikhathaleli uma ngungoti noma umfundamakhwela, ngoba asisoze sayeka ukufunda imikhonzo 😀
ULuis Lopez kusho
Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle kakhulu, futhi ngiyasiqonda isimo sakho. Ngilwela ukugcina ibhulogi encane engiyiqale muva nje futhi umsebenzi uba nzima ...
Ukunikela emphakathini kuyinto engiyithanda kakhulu, ngakho-ke ngizoqala ukucabanga ngokuthile 🙂
Wenze umsebenzi oncomekayo ngaleli sayithi, siyakuhalalisela futhi sihalalisela!
Ukubingelela okuvela e-Uruguay
Phendula uLuis López
Ngifuna ukuhalalisela wena, siyawazi umsebenzi nokuzinikela okudingekayo ukugcina ibhulogi enekhwalithi ye- "Masisebenzise i-Linux" ngeminikelo emihle kakhulu. Amasayithi afana nalawa asemanje kakhulu kunakuqala manje ukuthi ngakolunye uhlangothi aya ngokuya evalwa futhi azama ukuphatha noma ngumthombo omncane kakhulu wekhompyutha.
Ezweni lami, ngizama ukukhuthaza isoftware yamahhala ngakho konke engikwaziyo, ikakhulukazi "Ubuntu" engicabanga ukuthi kuhlukile futhi okuningi engikushicilela ekhasini lami lobuso, ngiyavuma, kuvela kule bhulogi.
Umbono muhle futhi ngethemba ukuthi uzowuthola umsindo emphakathini, ngoba amandla "Omphakathi" impela ekubambeni iqhaza okusebenzayo kwawo wonke amalungu awo. Phambili…
i-croaker anurus kusho
Namuhla amabhulogi amaningi asiza ukusebenzisa uhlelo lwethu, esingazondla ngalo, kepha-ke kunethezeke kakhudlwana uma kuphakathi kwezinye noma kubhulogi eyodwa, yingakho ngihlala ngisebenzisa le bhulogi futhi impela kunabantu abaningi abangabambisana ngokwabelana ngolwazi, angazi Uma ngikwazi ukusiza ngokuthile, ngicabanga ukuthi ku-GIS ngingabhala i-athikili, yize sekukhona amanye amabhulogi enza okufanayo, okusobala ukuthi le bhulogi yinhle kakhulu labo bethu abasebenzisi, umzamo nokuzinikela unomphela, into ebuhlungu kuphela ukuthi babe nabantu abambalwa kangaka abaziwayo abasondelene nomuntu ozimisele ukusebenzisa i-linux kudeskithophu noma incwajana, ngaphandle kokudlala kumakhalekhukhwini nge-android futhi akukho okunye
Phendula ku-anuro croador
Ngiyabonga Eider ... kunjalo-ke ...
UJoel Almeida Garcia kusho
Ngiyengeza ukuthi wumphakathi wesiphakamiso, hhayi "wempi ye-distros" noma "izindawo zedeskithophu", kepha kunalokho kube yinkundla noma "i-buffet" lapho sonke singabona khona izinhlangothi ezinhle nezimbi, njengoba nabasebenzisi umqondo oqondile wezihloko.
Phendula uJoel Almeida García
Sanibonani bangani, ngisanda kuthumela umnikelo wami ngiyethemba futhi uzosiza abaningi. Usale kahle
U-Eduardo Campos kusho
Ngabe kufanele kube yiLinux nje ngokubanzi, noma ingagxila kwi-distro eyodwa (ongayisebenzisi nokuyisebenzisa)?
Phendula u-Eduardo Campos
U-Angel J. Mota kusho
Sawubona, ngisebenzisa uhlelo lwe-BackInTime ku-Ubuntu 12.04 lts, ​​kepha lapho ngizama ukumisa lolu hlelo ku-Ubuntu 12.10 ifolda .gvfs ayitholakali ngakho-ke angikwazi ukumisa uhlelo. Ngiyabonga kusengaphambili ngoba ngiyazi ukuthi ungangisiza.
Phendula u-Angel J. Mota
Umbono omuhle kakhulu nesikhuthazo esihle sokuqhubekela phambili !!
Ngifuna nje ungivumele ngikubonge ngokwabelana ngolwazi lwakho! … Umsebenzi onzima !!!
UJorge Ruiz kusho
Isimemo sithi: "Masisebenzise iLinux"
Futhi ukwabelana ngolwazi, akusibizi lutho futhi singathola inzuzo eningi!
Phendula uJorge Ruiz
UCarlos Rocha kusho
Ngisungule imihlahlandlela eyisisekelo yokusebenzisa i-libreoffice engisebenza kuyo eqenjini lendawo, sikwenza kanjani lokho?
Lapho ngishiye isixhumanisi ngicacisa ukuthi leyo mihlahlandlela kumele ngiyilungise futhi lapho awuphilile kahle singenzani ngalokho?
Phendula uCarlos Rocha
Ngiyavuma, kufanele unikele ngokuthile ...
Ngifuna ukungeza ukuthi kwesinye isikhathi abantu abaningi bafuna ukuqala ibhulogi yabo, ukuze babelane ngolwazi lwabo ngale ndlela. Kepha ekugcineni ibhulogi iphela "kungabi nalutho", iphelelwe yisikhathi ngaphandle kokuthunyelwe, noma ngokuthunyelwe okuhle kakhulu kepha ayizange ibe nokusabalalisa okuhle futhi lokho okuthunyelwe ekugcineni akufinyelelanga noma ngubani (noma abantu abambalwa kuphela) abakhululekile umphakathi wesoftware ubungazi ukuthi ngiyazuza kakhulu, ngoba angifinyeleli kubantu abaningi. Ngaphandle lapho asinaso isikhathi sokukwazi ukufaka ebhange ukuthi ukugcinwa kwebhulogi indlela engcono yokufinyelela abantu abaningi kunje. Ukusiza amabhulogi aziwayo lapho kunokugeleza okuningi kwabantu futhi njengoba kusho ngenhla bazophatha ukukunika konke ukubonga nokubeka igama lombhali othathe inkinga ukukwenza ekunikeza ukubaluleka okufanele noma kunjalo Ngiyacabanga hehe. Jabulela
URodny Silgado Cabarcas kusho
Isiphakamiso sihle kakhulu, ezinsukwini ezimbili ezedlule ngenze ibhulogi ngoba ngithole okuthile esivele sikhona ku-Ubuntu enguqulweni yaso engu-12.10 enokuguqulwa okuncane futhi ngemuva kokuyishicilela ngacabanga, manje? Angikwazi ukuqhubeka ngiyondla, anginaso isikhathi. Lesi siphakamiso ngabe siphelele.
Phendula uRodny Silgado Cabarcas
Eddy santana kusho
Isinyathelo esihle kakhulu, ngiyethemba kunabasebenzisi abaningi abakhuthazwayo futhi bathumele iminikelo yabo, ngakho-ke kuzotholakala ibhulogi ehlukahlukene.
Phendula u-Eddy Santana
Ngicabanga nokuthi isithombe sibaluleke kakhulu, abanye abaqalayo baba nesithukuthezi ngokubona umbhalo omsulwa futhi ngicabanga ukuthi kungaba kuhle uma kungezwe isithombe esincane soshintsho. Ekuqaleni ukuthumela kungaba nzima kepha ngokuhamba kwesikhathi nocwaningo ufunda ukuthi ungathuthukisa kanjani futhi wenze umsebenzi wakho ufundeke kalula.
I-netbook entsha ye-ASUS F201E ene-Ubuntu efakwe kuqala
Ngokombono wami: Yini iDesdeLinux enikela ngayo ngempela emphakathini womhlaba?